Galaha Amaanka oo ku amray Farmaajo in si deg-deg ah ku qabto shirkii DFS iyo Dowlad Goboleeyada - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Galaha Amaanka oo ku amray Farmaajo in si deg-deg ah ku qabto...
Galaha Amaanka oo ku amray Farmaajo in si deg-deg ah ku qabto shirkii DFS iyo Dowlad Goboleeyada
Xogahaya guud ee qaramada Madoobaya ayaa qoraalkii joogta ahaa ee uu gudibin jiran xubnaha Golaha Amaanka ee arimaha Soomaliya maanta u gudbiyay Golaha. António Guterres ayaa si ay caro ku jirto ugu sheegay Golaha Amaanka in aan caalamka marnaba ogolaan doonin in Soomaaliya dib loogu celiyo xaaladii adkeyd ee ay ka soo gudubtay ee dagaalka sokeeye.
Dhanka kale wakiilka gaarka ee Xoghaya guud Mudane James Swan oo isna qudbad Dulmar ah ku sheegay in ay naxiib xumo tahay in xal loo waayo Wadahadalka dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe.
Hadalka maanta uu soo jeediyay António Guterres iyo waliilkiisa gaarka ah ayaa ku soo aaday iyada oo Golaha Amaanka ay maanta ansaxiyeen qararkii dib loogu cusboonaysinayay joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya. Hadalka cuslaa ee maanta lagu canaantay Farmaajo iyo Kheyre ayaa waxa uu hordhac u yahay go’aan dabayaaqada bishaan ay Qaramada Midoobay ku dhawaaqi doonto kaas oo awooda si daddan ugala wareegayo Farmaajo iyo Kheyre, isla markaana lala simayo dowlad goboleedyada.
Waxaa muuqata in beesha caalamka ay go’aan wadajira ka qaateen xaalada cakiran ee ka sii daraysa ee ka jirta dalka Soomaaliya.
3 1 minutes
Previous articleDowlad Goboleedka Jubaland oo sheegtay inaysan aqoonsaneen howlaha DFS ka wado G/Gedo
Next articleDeg deg. Hey’adaha Amniga oo xiray Amiin Ambulance
Miino si yaab geed lagu xiray oo lagu qarxiyey Ciidamada Haramcad ee Booliska
Beesha Daarood oo Go’aansatay inay Qaadato Wasiirka Kowaad ee dalka 2021.
War Murtiyeed lagu wado in uu ka soo baxo Shirka Muqdisho ee Musharixiinta Madaxweynaha? (Farriimaha loo dirayo Farmaajo)
Somalia’s Strongest Tropical Cyclone Ever Recorded Could Drop 2 Years’ Rain In 2 Days
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - November 23, 2020
The strongest tropical cyclone ever measured in the northern Indian Ocean has made landfall in eastern Africa, where it is poised to drop two...
No Shortcuts to Negotiating With al-Shabaab
Editor’s Note: The United States recently attempted to negotiate with al-Shabaab, a Somali terrorist group tied to al-Qaeda. Negotiations appear to have failed almost...
Miino si yaab geed lagu xiray oo lagu qarxiyey Ciidamada Haramcad...